Xasan Sheekh oo Baasiin ku sii shubey Xayiraadi maanta lagu sameeyey Shiikh shariif Dowladdana ku tilmaamey mid ka faaidaysanaysa… — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA Xasan Sheekh oo Baasiin ku sii shubey Xayiraadi maanta lagu sameeyey Shiikh...
Xasan Sheekh oo Baasiin ku sii shubey Xayiraadi maanta lagu sameeyey Shiikh shariif Dowladdana ku tilmaamey mid ka faaidaysanaysa…
Madaxweynihii hore ee Dowlada Faderaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay tallaabooyinka dowladda Soomaaliya qaadeysay ee la xariira arimaha Duulimaayada Kismaayo iyo Muqdisho oo mudooyinkaan dambe taagnaa.
Qoraal kooban oo Madaxweyhi hore dalka Xasan Sheekh uu bartiisa Twitter-ka soo geliyay ayuu ku sheegay in Soomaaliya ay muddo 30 sano ah sugeysay in ay gacanta ku dhigto maamulka Hawadeeda, sidoo kale aan loo baahnaayn in loo adeegsado sidii hubkii sida uu sheegay.
“Waa xaalad murugo leh in dowladdu u isticmaasho maareynta hawada sidii hub siyaasadeed oo saameyn culus ku yeelan kara xasilloonida siyaasadeed iyo midnimada dalka”ayuu yiri Xasan Sheekh.
Xasan Sheekh ayaa kula taliyay dowladda Federaalka in ay ka fikirto tilaabada ay qaadayso waxa ka dhalan kara, kana laabato dariiqa hadda wax loo wado.
Hadalkan ka soo yeeray Xasan Sheekh ayaa daba socda awaamiirta dhanka duulimaadyada ee ay dowladdu ku soo rogtay diyaaradaha aadaya Kismaayo, iyadoo maanta la joojiyay diyaarad Muqdisho ka qaadi laheyd Madaxweynihii hore Sheekh Shariif oo ku sii jeeday Kismaayo si uu uga qayb galo Xaflada Caleema saarka Axmed Madoobe oo lagu wada in ay Kismaayo ka dhacdo 26-da bishaan.
Previous articleDucaale iyo xubno kale oo u tagay Sheekh Shariif, codsi deg deg ahna hor-dhigay &Cabsi laga qabo in…..
Next articleItoobiya oo soo bandhigtay xubno ay ku sheegtay Al Shabaab iyo Daacish (Sawirro)
XOG LA OGAADAY: Sacuudiga & UAE Oo wada qorshe ay Dekada...
Hindiya: Malaayiin qof oo laga cabsi qabo inay lumiyaan muwaadinnimadooda xaalad...